हनिमुनलाई कसरी सार्थक बनाउने ? « Sadhana
हनिमुनलाई कसरी सार्थक बनाउने ?
विवाहपश्चात् हरेक युवाहरु चिन्तित हुन्छन् । उनीहरु हनिमुन अवधिमा पत्नीलाई कसरी सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ भनेर मनमनै सोच्छन् ।
विशेष गरी अहिलेका नवयुवाहरु शहरको होहल्लाबाट टाढा हनिमुनका लागि जान्छन् । उनीहरुमध्ये केहीले आफन्त, साथीहरुबाट हनिमुनको बारेमा सुनिसकेका हुन्छन् । ‘फस्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन’ अर्थात् पहिलो प्रभाव नै अन्तिम छाप हो । यदि उसले हनिमुनमा आफ्नी पत्नीलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन भने जिन्दगीभर पत्नीसँग शिर उठाएर कुरा गर्न कठिन पर्नेछ ।
धेरै युवाले हनिमुनको बेला यौन, प्रेम, रोमाञ्चकताबाट आनन्द प्राप्त गर्नुको साटो अन्य व्यावहारिक जीवनमा समय बर्बाद गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी समयको बर्बादी संसारका धेरै युवाले गर्ने गर्छन् । हनिमुनको बारेमा सही जानकारी नभएको कारणले गर्दा उनीहरु यसबारेमा गलत धारणा बनाउँछन् र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्छन् । कतिपयको हनिमुनका समयमा कुनै योजना नै हुँदैन । विवाहसँगै उनीहरुको कौतुहलता, रोमाञ्चकता पनि समाप्त हुन्छ । व्यावहारिक जीवनमा उनीहरु व्यस्त हुन्छन् । यसले उनीहरुको जीवनलाई निराश बनाइदिन्छ ।
हनिमुन एक–अर्कालाई चिन्ने राम्रो मौका भएकोले यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । हनिमुनमा दुवै जना परिचित हुन्छन् र स्वतन्त्र हुन्छन् । हनिमुनको सुखद र ताजा स्मृतिको लागि अमेरिकन नेसनल इन्स्टिच्युट अफ सेक्स बायोलोजीका डा. एन्ड्यु कपरले केही उपयोगी जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकी प्रख्यात यौनविद् डा. सारेन उल्प भन्छन्, ‘यदि पति–पत्नीले हनिमुनको समय कसरी उपयोग गर्ने र आप्mना चाहनाहरु कसरी पूरा गर्ने भन्ने बुझे भने मात्र हनिमुन सफल हुन्छ । विवाहपछि हनिमुनका लागि विभिन्न नयाँ र रमाइला स्थानहरु जस्तो– चिया बगान, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ताल, ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक क्षेत्रलाई छनोट गर्न सकिन्छ । यसको अलावा कुनै जंगलको बीचमा क्याम्पिङ गरेर हनिमुनको आनन्द लिन सकिन्छ ।’
प्राकृतिक स्थान छनोट गर्नुहोस्
हनिमुनको लागि उपयुक्त मौसम भएको स्थान छनोट गर्नुपर्छ, जहाँ प्रचण्ड गर्मी वा कठ्याङ्ग्रिने जाडो पनि नहोस् । भ्रमण गर्ने स्थान दर्शनीय, मन्दिर, प्राकृतिक छटायुक्त हुनुपर्छ तर धेरै भीडभाड भएको स्थानचाहिँ नहोस् । हनिमुनको यात्रा धेरै लामो पनि हुनुहुँदैन । कम समयमा नै बढी स्थानमा घुम्ने योजना पनि नबनाउनुहोस् । आफू जुन स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यस ठाउँको लागि टिकट बुकिङ पहिले
नै गराउनुहोस् ।
यदि तपाईं चिसो मौसम भएको स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पर्याप्त मात्रामा न्यानो लुगा लैजानुपर्छ । गर्मी मौसम भएको ठाउँमा जानुहुन्छ भने टी–सर्ट, हाफ पाइन्ट, सेनेटरी न्याप्किन्स र पीडा निवारक औषधि आफूसँग राख्नुहोस् ।
हनिमुन जाने उपयुक्त समय
हनिमुन जाँदा विवाह भएको लगत्तै जाँदा उपयुक्त हुन्छ । विवाह भएको धेरै समयपछि जानुको कुनै अर्थ हुँदैन । भर्खरै विवाह हुँदा तरोताजा र आत्मविश्वास बढी हुन्छ । त्यसैले यही समयमा नवदम्पतीहरु आफ्नो भविष्यको सपना बुन्ने गर्छन् । कुनै प्रकारको घबराहट पनि महसुस हुँदैन ।
एकले अर्कालाई बुझ्नुहोस्
हनिमुन जानुको उद्देश्य शारीरिक सम्पर्क मात्र नभएर भावनात्मक क्रिया पनि हो । जुन क्रिया आफ्नो जीवन साथीसँग मिलेर सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ । एकले अर्काेलाई नचिनीकन भविष्यमा यो सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । यससम्बन्धमा यौनविद् डा. मोनिका फ्रन्ट भन्छिन्, ‘प्रत्येक युवायुवतीले विवाहपछि नयाँ जिन्दगीको शुरुवात गर्नुपर्छ । अतीतको जिन्दगीलाई गाडिएको मूर्दाझैँ पुरिएर रहन दिनुहोस् ।’
हनिमुन जाँदा सम्पूर्ण समय घुमफिर र प्राकृतिक दृश्य हेर्न मात्र केन्द्रित नगर्नुहोस् । किनकि हनिमुन मनाउन जाने प्राकृतिक स्थानमा यौनसम्पर्क गरेको खण्डमा जीवनको विशेष आनन्द अरु बढी हुन्छ । यही स्थानमा त्यस रात पत्नीसँग सहवास गर्दै चुम्बन र उनको सुन्दरताको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट पति–पत्नीको संकोच दूर रहनेछ । अमेरिकी यौन मनोवैज्ञानिक जेसिका पार्कर भन्छिन्, ‘चुम्बन जति गहिरो हुन्छ, यौनक्रीडा पनि त्यति नै सफल हुन्छ ।’
प्रेम गर्दै उपहार दिनुहोस्
हनिमुनको अर्काे रोचक सूत्र हो आत्मैदेखि प्रेम र उपहार दिनु । यौन विशेषज्ञ डा. रोवी विलियम भन्छन्, ‘हनिमुन यस्तो अवस्था हो जहाँ एकले अर्कालाई बुझ्ने कोशिश गरिरहेका हुन्छन् । प्राकृतिक स्थानमा घुम्ने क्रममा यदि चिरबिरे चराहरु कराउँदै आएमा दुवैले उफ्रँदै निर्धक्कसँग हाँस्ने र प्रेमपूर्वक कुनै उपहार दिएर पत्नीलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । यो क्षणमा दिएको उपहार अनमोल हुन्छ । यस्तो उपहार दिनुहोस्, जसले पत्नीलाई उत्साहित र रोमाञ्चित बनाओस् ।
हनिमुनकै सिलसिलामा बिहानीको समयमा आफ्नी पत्नीलाई पनि सँगै लिएर कोठाबाट १ घण्टा जति हाइकिङ गर्न जानुहोस् । यसबाट दुवैको मुड फ्रेस हुन्छ र मानसिक शक्ति मिल्छ । यसको लागि तपाईंले नदीको छेउछाउ, तालको किनारा, पार्क, जंगल वा खुल्ला मैदान आदि स्थानको छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट शरीरलाई स्वच्छ अक्सिजन मिल्छ र मनमा नयाँ उत्तेजनाको विकास हुन्छ । यसको साथै हरियाली, नीलो आकाश, नदी र ताल हेर्नाले मनमा शान्ति मिल्छ ।
प्रदूषित वातावरणबाट बच्नुहोस्
प्रदूषण मानवस्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । प्रदूषणको प्रभाव सबैभन्दा बढी शुक्राणुमाथि पर्छ । प्रदूषणको प्रभावबाट शुक्राणु कमजोर र अस्वस्थ हुन्छन् । त्यसैले हनिमुन मनाउँदा प्रदूषित शहरमा विलकुलै नजानुहोस् । प्रदूषणकै कारणबाट शुक्राणुको संख्यामा तीव्ररुपमा गिरावट आइरहेको हुन्छ । यसले स्वस्थ शुक्राणुको निर्माणमा बाधा पुग्छ ।
स्रोत : रिडर डाइजेस्ट